BitTorrent Ugbu a, Ngwa Nnwere Onwe, Abịa na Android | Gam akporosis
Manuel Ramirez | | Ngwa gam akporo, Egwu efu, Noticias
Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ọrụ egwu na-akwado iweta ụda olu ndị ahụ niile na n'akụkụ ụfọdụ nke ndụ anyị nwere oge ndị ga-agbada na ncheta anyị dị ka ụbọchị ụlọ akwụkwọ sekọndrị, mgbe anyị na ndị enyi anyị gara oriri oriri ma ọ bụ mgbe anyị nọrọ ọtụtụ afọ na mahadum . Egwu ahụ na-egosipụta akụkụ nke steeti anyị nke mmetụta uche ma ya mere enwere ọtụtụ ọrụ jikọtara nke ọma na nke a.
Mana ọ bụghị ha niile na-akwado ịnye ndị otu mmachi niile anyị niile maara n'egwuregwu dị iche iche, kama ha chọrọ ịnye oghere maka ndi egwu na amaghi ama onye nwere ike ịchọta saịtị ha na BitTorrent Ugbu a, egwu egwu na ngwa vidio vidiyo nke rutere na Android taa. Ọrụ ị nwere ike ịnweta iji zute ndị omenkà nọọrọ onwe ha nke karịrị azụmaahịa na amaara nke ọma.
1 A raara onwe ya nye ngwa maka onwe ha music
2 Ngwa ahụ n'onwe ya
A raara onwe ya nye ngwa maka onwe ha music
Ọtụtụ n'ime ndị omenkà ama ama n'oge egwu rock ma ọ bụ egwu indie, gafererịrị oge ụfọdụ ịbụ ndị omenkà egwu ahụ. Kpọọ dị ka onwe gị. Nke a na - enye nnwere onwe nnukwu ohere ma a bịa na ndị otu egwu ma ọ bụ ndị na - agụ egwu iji gosipụta onwe ha maka ihe na-enwekarị ụlọ ọrụ nke ya. Ya mere, ngwa dị ka BitTorrent Ugbu a nwere ike ịbịaru aka ịchọpụta egwu ọhụụ nke na-esiri ike mgbe ụfọdụ ịnweta.
Egwu nile ị hụrụ na BitTorrent Ugbu a bụ nke ndị na-emepụta ọdịnaya ha na-eweta. Nke ahụ kwuru, ọ bụghị ọdịnaya niile ị nwere ike mụta nwa anaghị akwụ ụgwọ kpamkpam, ebe ụfọdụ ga-eji mgbasa ozi ma obu ha gha acho ugwo maka inweta. Ọ dabere na "ụyọkọ" maka ọdịnaya akwụ ụgwọ. Nwere ike iji faịlị n'efu, wee kwụọ ụgwọ maka ụfọdụ iji nweta ọdịnaya adịchaghị. Artists nwekwara ike ịtọ a kacha nta price maka ndị "n'ùkwù n'ùkwù", ọ bụ ezie na ọ bụrụ na-amasị gị otu ma ọ bụ onyeegwu ị nwere ike mgbe niile na-akwụ ụgwọ ndị ọzọ.
N'ihi nke a, anyị nọkwa n'elu ikpo okwu ebe ndị na-ese ihe nwere ike ịchọta uru ma si otú a nọgide na-ede ma na-eme egwu, ya mere ọ dịkwa njọ na ụdị ịkwụ ụgwọ a na-enye.
Ngwa ahụ n'onwe ya
Ngwa bụ a haziri nke ọma ịbụ ụdị nke mbụ ma nwee chinchi. Anyị malitere ya ma anyị nwere nhọrọ nke ịbanye na Facebook, Gmail ma ọ bụ mepụta akaụntụ ọrụ nke anyị. N'ime ngwa ahụ, isi ngebichi na-apụta ebe anyị hụrụ ka akwadoro, omume, ịgbaso ya na nhọrọ ọchụchọ. N'aka nke ọzọ, anyị nwere profaịlụ nke anyị nwere ike ịhụ mmepụtaba dị ugbu a, ọkacha mmasị na onye anyị na-eso.
Ọ bụrụ na anyị pịa nke ọ bụla n'ime ndị na-ese ihe na-egosi na a kwadoro, anyị na-enweta profaịlụ nke ha ebe anyị nwere ike iso ha, mụta nwa isiokwu ha ma chọta nkọwa nke ụdị na echiche ha. N'ebe a, anyị na-ahụ interface yiri nke nke YouTube mana ejiri nke ọma mee ya n'ọchịchịrị ma nke ahụ guzo maka ụdị nke font na ihe nkiri dị iche iche. Nke bụ eziokwu bụ na BitTorrent Ugbu a nwere ụdị nke ya nke na-etinye ya n'ihu ngwa pụrụ iche pụrụ iche n'echiche a. Mana m kwuru, ọ nwere chinchi.
Taabụ na-ewu ewu na-akpọrọ anyị Ọtụtụ ndị na-ese ihe ma ọ bụ ìgwè dị iche iche ọ na - enyere anyị aka ịmata nke kachasị amata n’elu ikpo okwu a. Ọ dị mkpa ịkọ na a ga-ahụ hashtags n'ọtụtụ ebe na ngwa ahụ ma mee ka anyị nwee ike ịnweta otu dị iche iche na egwu metụtara ya. Uru ọzọ bụ inwe ike ịgbaso ndị ọkacha mmasị gị kachasị amasị ya na nhọrọ ọchụchọ nke ndị hashtags niile ahụ pụtara ọzọ n'ụdị nke edemede iji nweta ọnọdụ, ọzọ, ihe nkiri, electro, folk, hip hop, funk, dubstep na ọtụtụ ndị ọzọ nke m gbaa gị ume inyocha.
Ngwa na-adọrọ mmasị nke ahụ emepe anyị ka onwe ha music site na BitTorrent na nke a na - esonyere ndị ọzọ dika SomaFM nke ghọrọ n'efu n'oge na-adịbeghị anya.
BitTorrent Ugbu a
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » BitTorrent Ugbu a bụ ngwa ọhụụ ọhụụ nọọrọ abịarutela gam akporo
A ga-emelite Google Maps n'oge na-adịghị anya yana nhọrọ iji budata map ndị ahụ na-enweghị njikọ na SD